လူအများစိတ်ဝင်စားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေး အခြေအနေ - Khitamyin
လူအများစိတ်ဝင်စားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးအခြေအနေ….
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဉီးကျော်မိုးထွန်း (၇၅) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ ပိတ်ပွဲ နှင့် (၇၆) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ ဖွင့်ပွဲ အစည်းအဝေး များသို့ တက်ရောက်။
(၇၅)ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၊ ပိတ်ပွဲအစည်းအဝေးကို ယနေ့၊ ၁၄-၉၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၃)နာရီအချိန်၌ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အစည်း အဝေး ၌ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. António Guterres မှ မိန့်ခွန်းပြောကြား ခဲ့ပြီး၊ (၇၅) ကြိမ်မြောက် အထွေထွေညီလာခံ၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ H.E. Mr. Volkan Bozkir မှ နှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်၊ (၇၆)ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန် ရွေးချယ်ခြင်း ခံထားရသည့် H.E. Mr. Abdulla Shahid မှ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့သည်။
ထို့နောက် (၇၆)ကြိမ်မြောက်၊ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ ပထမအကြိမ် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး ကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ၊ အစည်းအဝေးကို
(၇၆)ကြိမ်မြောက် အထွေထွေညီလာခံဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Abdulla Shahid မှ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်၊ အထွေထွေညီလာခံ၏ အရည်အချင်းစစ် ကော်မတီ (Credentials Committee) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
အရည်အချင်းစစ် ကော်မတီ တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအဖြစ် ဘဟားမားစ်၊ ဘူတန်၊ ချီလီ၊ တရုတ်၊ ရုရှား၊ ဆီရာလွန်၊ တောင်အာဖရိက၊ ဆွီဒင်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တို့ပါဝင်သည်။
အဆိုပါ (၇၅) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၊ ပိတ်ပွဲအစည်းအဝေး နှင့် (၇၆) ကြိမ်မြောက်၊ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ ဖွင့်ပွဲ နှင့် ပထမအကြိမ် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးများသို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဉီးကျော်မိုးထွန်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၊
Edit:-မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ရန်ဒီဇင်ဘာလသို့ရွေ့ဆ်ိုင်း လတ်တလောအစည်းအဝေးများ တွင်ဦးကျော်မိုးထွန်းအားမိန့်ခွန်းစကားမပြောစေပဲ ယာယီဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့်ပြုထား။ စစ်ကောင် စီ၏ ကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်ခွင့်မရ။
လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားတဲ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံအစည္းအေဝးအေျခအေန
ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ဉီးေက်ာ္မိုးထြန္း (၇၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ ပိတ္ပြဲ ႏွင့္ (၇၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ ဖြင့္ပြဲ အစည္းအေဝး မ်ားသို႔ တက္ေရာက္။
(၇၅)ႀကိမ္ေျမာက္ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၊ ပိတ္ပြဲအစည္းအေဝးကို ယေန႔၊ ၁၄-၉၂၀၂၁ ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၃)နာရီအခ်ိန္၌ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အစည္း အေဝး ၌ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ H.E. Mr. António Guterres မွ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး၊ (၇၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံ၊ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ H.E. Mr. Volkan Bozkir မွ ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္၊ (၇၆)ႀကိမ္ေျမာက္အေထြေထြညီလာခံဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ခံထားရသည့္ H.E. Mr. Abdulla Shahid မွ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ (၇၆)ႀကိမ္ေျမာက္၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ ပထမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး ကို ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ရာ၊ အစည္းအေဝးကို
(၇၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံဥကၠ႒ H.E. Mr. Abdulla Shahid မွ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္၊ အေထြေထြညီလာခံ၏ အရည္အခ်င္းစစ္ ေကာ္မတီ (Credentials Committee) အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။
အရည္အခ်င္းစစ္ ေကာ္မတီ တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ဘဟားမားစ္၊ ဘူတန္၊ ခ်ီလီ၊ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ ဆီရာလြန္၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ဆြီဒင္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တို႔ပါဝင္သည္။
အဆိုပါ (၇၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၊ ပိတ္ပြဲအစည္းအေဝး ႏွင့္ (၇၆) ႀကိမ္ေျမာက္၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ ဖြင့္ပြဲ ႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဉီးေက်ာ္မိုးထြန္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕႐ုံး၊
Edit:-ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ဒီဇင္ဘာလသို႔ေ႐ြ႕ဆ္ိုင္း လတ္တေလာအစည္းအေဝးမ်ား တြင္ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းအားမိန္႔ခြန္းစကားမေျပာေစပဲ ယာယီဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳထား။ စစ္ေကာင္ စီ၏ ကိုယ္စားလွယ္တက္ေရာက္ခြင့္မရ။
“What happened to the wolf” ဟာ GLကားဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြခြင်းခံရ
“What happened to the wolf” ဟာ GLကားဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြခြင်းခံရ သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသူနဲ့ သရုပ်ဆောင် အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ နှစ်ယောက်ပါဝင်ထားသည့် what happened to…